mardi, 31 mars 2020 18:58
Coronavirus: Namono olona 04 tatsy amin’ny nosy Maorisy
143 ireo olona mitondra ny tsimokaretina covid-19 atsy amin’ny nosy Maorisy, ka tranga vaovao hita androany ny 15 amin’ireo. Efa namono olona miisa 04 tao amin’ity nosy ity ny valanaretina coronavirus.
mardi, 31 mars 2020 14:41
Andravoahangy – Antananarivo: Lehilahy nitolefika am-pitoerana nalaina tamin’ny ambulance
Lehilahy iray no lavo nitolefika am-pitoerana ary nitsikasina tamin’ny tany tamin’ny lalankely iray mampifandray an’Andravoahangy sy Andravoahangy Ambony - Antananarivo, io atoandro io, tsy fantatra antony. Nalaky tonga ny mpiasan’ny fahasalamana niaraka tamin’ny fiara mpitondra marary nijery naka azy teo nentina namonjy hopitaly. (Jereo Sary Tohiny)
mardi, 31 mars 2020 14:30
Sary: ‎Rajoelison Evariste
Andravoahangy – Antananarivo: Lehilahy nitsirara teny an-dalana nalaina tamin’ny ambulance
Lehilahy iray no lavo nitsirara amin’ny tany tamin’ny lalankely iray mampifandray an’Andravoahangy sy Andravoahangy Ambony - Antananarivo, izay koa no nahitan’ny olona azy io atoandro io, tsy fantatra antony. Nalaky tonga ny mpiasan’ny fahasalamana niaraka tamin’ny fiara mpitondra marary nijery naka azy teo nentina namonjy hopitaly. (Jereo Sary Tohiny)
mardi, 31 mars 2020 14:12